को हुन् गोर्खालीगका नयाँ अध्यक्ष ? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsको हुन् गोर्खालीगका नयाँ अध्यक्ष ?
को हुन् गोर्खालीगका नयाँ अध्यक्ष ?
October 23, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
तीन वर्षको निम्ति पार्टीबाट निकालिए भारती तामङ र लक्ष्मण प्रधान
कालेबुङः दार्जीलिङ पहाडको सबैभन्दा पुरानो राजनैतिक दल अखिल भारतीय गोर्खालीगलाई अब एसके प्रधानले नेतृत्व दिनेछन्। पश्चिम बङ्गाल सरकारसित मिलेर पार्टीविरोधी अनि जातिविरोधी कार्य गरेको अभियोगमा स्व. मदन तामङ पत्नी भारती तामाङलाई दलको अध्यक्ष अनि पार्टीबाट नै तीन वर्षको निम्ति निष्काषित गरिएपछि नयाँ अध्यक्षका रूपमा एसके प्रधानलाई चयन गरिएको हो।
आइतबार दार्जीलिङमा गोर्खालीग पोलित ब्यूरोको बैठक बसेपछि भारती तामाङ अनि लक्ष्मण प्रधानलाई पार्टीबाट तीन वर्षको निम्ति निष्काषित गरिनका साथै पार्टीको नयाँ अध्यक्षका रूपमा एसके प्रधानलाई चयन गरिएको छ।
को हुन् एसके प्रधान?
एसके प्रधान खरसाङ निवासी हुन्। उनी गोर्खालीग पार्टीमा 17 वर्षदेखि सक्रिय छन्। 1986 मा गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले गरेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनदेखि नै उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। गोरामुमो कार्यकर्ताका रूपमा 86 को आन्दोलन खटेका प्रधानले 1988 मा दागोपाप अस्तित्व आएपछि गोरामुमो छोडे।
त्यसपछि 2001 सालमा स्व. मदन तामाङको नेतृत्वमा रहेको गोर्खालीगमा लागेका प्रधानले आजसम्म पनि गोर्खालीगमै बसेर काम गरिरहेका छन्। हालमा उनी गोर्खालीग खरसाङ अध्यक्षका पदमा थिए।
जनतासम्म पुग्न सकेन गोर्खालीग
प्रधानलाई लाग्छ, गोर्खालीगका समर्थकहरू धेरै छन्। तर गोर्खालीग जनतासम्म कहिले पुग्न सकेन। कुनै पनि पार्टीको राजनैतिक मेरूदण्ड भनेको जनता रहेको कारण जनतासम्म पुग्न अनिवार्य रहेको विचार पोख्ने प्रधानले अब पार्टीलाई अघि बढाउन जनतासम्म पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने बताए।
‘अहिलेको पोलिटिकल सिनारियो जनतालाई बुझाउनुपर्छ। उनीहरूको समस्या बुझ्नुपर्छ। गोर्खालीगको समर्थक छन् तर जनतासम्म पुग्न सकेको छैन’, प्रधानले भने, ‘अब दार्जीलिङको तीनवटा महकुमा अनि कालेबुङमा जनसम्पर्क अभियान गर्ने हाम्रो सोच छ।’ आफूलाई स्व. मदन तामाङको सिद्धान्त र नीतिबाट प्रेरित रहेको बताउने प्रधानले यदि गोर्खाल्याण्ड माग्नु हो भने बङ्गालको कुनै पनि सहुलियत ग्रहण गर्नु नहुने बताए।
मदन तामाङको चाहना बङ्गालसित मिल्ने थिएन
‘स्व. मदन तामाङको चाहना बङ्गालसित मिलेर, जनभावनालाई कुच्लेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने थिएन’, अर्कोतिर लीग महासचिव प्रताप खातीले भने, ‘तर भारतीय तामाङ, लक्ष्मण प्रधानहरूले जनआकांक्षालाई कुल्चेर बङ्गालसित सहयोगी भएकोमा पार्टीले निष्कातित गरेको हो।
खातीका अनुसार बङ्गालले डाकेको बैठकमा जानुको कुनै औचित्य थिएन। यसैले पार्टीले बैठकमा नजाने निर्णय लिएको थियो। तर भारती तामङहरू बङ्गालले बोलाएको बैठकमा गइन्। त्यसपछि पार्टीले उनीहरूलाई कारण बताउ नोटिस् जारी गऱ्यो। उनीहरूले प्रत्युत्तर दिएनन्। पार्टीले उनीहरूलाई तीन महिनाको निम्ति निलम्बन गऱ्यो।
तर फेरि पनि उनीहरू बङ्गालले बोलाएको बैठकमा गएपछि अन्ततः पार्टीले उनीहरूलाई तीन वर्षको निम्ति पार्टी अनि पद्बाट नै निष्कासित गर्ने निर्णय लिएको खातीले बताए।
एनबीएसटीटी कार्यालय आगजनी काण्डमा डम्बर प्रधान पक्राउ